health Archives - Nagarik Today
होम » health
गाजरलाई चिसो मौसमको सुपर फुड मानिन्छ । यो स्वादिष्ट हुनुका साथै विभिन्न प्रकारको पोषक तत्वले पनि भरपूर हुन्छ । आधा कप गाजरमा २५ क्यालोरी, ६ ग्राम कार्बोहाइड्रेट, २ ग्राम फाइबर, ३ ग्राम सुगर र ०.५ ग्राम प्रोटिन हुन्छ । गाजरमा भिटामिन ए, के, सी, पोटासियम, फाइबर, क्याल्सियम र आइरनजस्ता सबै आवश्यक भिटामिन र मिनरल्स हुन्छन् । गाजरमा निकै राम्रो एन्टीअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छ जुन निकै लाभदायी हुन्छ । गाजर खाँदा शरीरलाई कस्ता कस्ता फाइदा पुग्छन्, त्यसबारे जानकारी लिऔं ।
गाजर आँखाका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । यसमा बिटा–क्यारोटिन भरपूर मात्रामा हुन्छ जुन शरीरमा पुगेर भिटामिन ‘ए’ मा परिवर्तन हुन्छ । यो भिटामिन आँखालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । यो बिटा क्यारोटिनले चर्को घामबाट आँखालाई हुने हानीबाट जोगाउँछ र मोतीबिन्दु र आँखाका अन्य समस्याको सम्भावनालाई पनि कम गर्छ । गाजरमा ल्यूटिन हुन्छ । शोधका अनुसार यसले उमेरसँगै आँखामा देखिने समस्यालाई पनि कम गर्छ ।
क्यान्सरको खतरा कम गर्छः
गाजरले क्यान्सरको सम्भावनालाई कम गर्छ । यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले तपाईंको शरीरमा हानिकारक फ्रि रेडिकल्ससँग लड्न मद्दत गर्छ । गाजरमा दुई मुख्य प्रकारका एन्टीअक्सिडेन्ट केरोटीनोयर र एन्थोसायनिन हुन्छन् । क्यान्सरसँग लड्नका लागि यो एन्टीअक्सिडेृन्ट निकै आवश्यक हुन्छ । केरोटिानोयडकमा कारण गाजर, सुन्तला रङको वा पहेँलो हुन्छ जबकी एन्गोसायनिनले यसको रङ रातो र प्याजी रङको हुन्छ ।
गाजर मुटुका लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसको एन्टिअक्सिडेन्ट मुटुका लागि पनि फाइदाजनक छ । यसबाहेक गाजरमा भएको पोटासियमले रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । गाजरमा पाइने फाइबरले तौल नियन्त्रण गर्छ र मुटु रोगको सम्भावना कम गर्छ । रातो गाजरमा लाइकोपिन पनि हुन्छ जसले मुटुरोगलाई रोक्छ ।
प्रतिरोधी क्षमतालाई पनि बढाउँछः
प्रतिरोधी क्षमता बढाउनमा पनि गाजर निकै फाइदाजनक छ । यसमा पाइने भिटामिन सी शरीरमा एन्टीबडिज बनाउनमा पनि मद्दत गर्छ जसले प्रतिरोधी प्रणालीलाई बचाउँछ । भिटामिन सीले तपाईंको शरीरलाई आइरन लिन र यसको उपयोग गर्नुका साथै संक्रमण रोक्न पनि मद्दत गर्छ ।
कब्जियतको समस्या टाढा राख्छः
कब्जियतको समस्याबाट बचाउनमा गाजर निकै फाइदाजनक छ । यदि तपाईंको पेट सफा हुँदैन भने तपाईंले काँचो गाजर खानुपर्छ । यसमा भएको फाइबरले कब्जियतलाई कम गर्छ । यसबाहेक गाजरमा क्याल्सियम र भिटामिन के हुन्छ, यी दुबैले हड्डी बलियो बनाउँछन् ।
मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्छः
गाजरले मधुमेहलाई पनि नियन्त्रणमा राख्छ । मधुमेहका बिरामीले गाजरसहित बिना स्टार्च भएको तरकारी खान सल्लाह दिइन्छ । गाजरमा भएको फाइबरले ब्लड सुगरको स्तरलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ । गाजरको भिटामिन ए र बिटा क्यारोटिनले मधुमेह हुने सम्भावाना पनि कम गर्छ ।
यस्ता व्यक्तिहरुले बिर्सेर पनि नखानुहोस् चुकन्दर
by नागरिक टुडे कार्तिक २६, २०७८
स्वास्थ्यका लागि चुकन्दरको सेवन निकै फाइदाजनक मानिन्छ । धेरैजसो मानिस सब्जी, सलाद वा जुसको रुपमा यसलाई खानामा समावेश गर्ने गर्छन् । चुकन्दरले शरीरमा रगतको कमी हुन दिँदैन र विभिन्न प्रकारको फाइदा पुर्याउँछ । तर केही स्वास्थ्य समस्या भएको अवस्थामा यसलाई बिर्सेर पनि खानुहुँदैन । नभए यसले हानी गर्नेछ ।
कम रक्तचापमा नखानुहोस्ः
रक्तचाप कम हुँदा चुकन्दरको सेवन गर्नुहुँदैन । उच्च रक्तचापमा तपाईं यसलाई खान सक्नुहुन्छ तर कम हुँदा नखाएकै राम्रो । चुकन्दरले रक्तचापलाई कम गर्ने भएकाले यस्तो गर्न सुझाइएको हो ।
मृगौलामा पत्थरी भएको अवस्थामाः
मृगौलामा पत्थरीको समस्या छ भने चुकन्दर खाँदा तपाईंलाई हानी हुनेछ । यसले पत्थरीलाई बढाउने काम गर्छ । चुकन्दरले आइरनको कमी पूर्ती त गर्छ तर यसमा अक्सलेटको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । अक्सलेटको सेवन अत्यधिक गर्दा मृगौलामा पत्थरीको समस्या बढ्ने गर्छ । जसलाई पहिले नै पत्थरीको समस्या छ, चुकन्दरको सेवनले यो समस्या बढाउन सक्छ ।
चुकन्दरमा भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट, फाइटोन्यूट्रियन्ट्स, पलीफिनोल्स र डायट्री फाइबरसहित विभिन्न पोषक तत्व पाइन्छन् तर यसका कारण केही मानिसहरुलाई एलर्जी पनि हुनसक्छ । यसले छालामा डाबर आउने समस्या निम्तिन सक्छ । चुकन्दर खाएपछि कुनै पनि प्रकारको एलर्जी वा छालामा डाबर देखिए यसको सेवन बन्द गरेर डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् ।
गर्भवती महिलाका लागि हानिकारकः
गर्भवती महिलालाई पनि चुकन्दरको सेवन नगर्न सल्लाह दिइन्छ । यसको अत्यधिक मात्रा गर्भवती महिलाका लागि खतरनाक हुनसक्छ ।
ब्लड सुगरको स्तर बढाउन सक्छः
चुकन्दरको सेवन गर्दा ब्लड सुगरको स्तर बढ्न सक्छ । जसलाई मधुमेहको समस्या छ, उनीहरुले चुकन्दरको सेवन बिर्सेर पनि गर्नु हुँदैन । यसको ग्लाइसेमिक इन्डेक्स बढी हुन्छ जसले तपाईंलाई हानी गर्नसक्छ ।
चुकन्दरको अत्यधिक सेवनले कलेजोलाई क्षती पुर्याउन सक्छ । चुकन्दरमा कपर, आइरन, फस्फोरस, म्याग्नेसियमको उच्च मात्रा हुन्छ । यो तपाईंका लागि फाइदाजनक त हुन्छ तर यसको अत्यधिक सेवनले यी सबै कुरा कलेजोमा गएर जम्मा हुन थाल्छन् । यसले कलेजोलाई क्षती पुर्याउँछ ।
कार्तिक २६, २०७८0comment
तेलले मुटुलाई बलियो बनाउँछ कि हानि गर्छ ?
by नागरिक टुडे कार्तिक ११, २०७८
बजारमा आउने कतिपय विज्ञापनमा तेलले मुटुलाई बलियो र सुरक्षित बनाउँछ भनिन्छ । तर बजारमा आउने विज्ञापनमा जस्तै मुटुको सुरक्षाको लागि तेलको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ त ? चिकित्सकहरू तेलले मुटु बलियो बनाउन सहयोग नै गर्छ भनेर ढुक्क हुन नसकिने बताउँछन् । यसको मात्रा मिलाउन नजाने तेलले उल्टै हानि गर्न सक्ने भन्दै यसको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । यद्यपि मुटुको स्वास्थ्य र तेलको उपभोगका बीचमा सम्बन्ध नभएको भने होइन । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. राजेन्द्र कोजु मुटुको स्वास्थ्य र तेलको सम्बन्धबारे यसरी सुनाउँछन् ।
तेलले मुटु बलियो बनाउँछ नै भन्ने हुँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि तेल आफैँमा शरीरको लागि आवश्यक पेय पदार्थ भने पक्कै हो । आयल भन्ने बित्तिकै यसमा फ्याट हुन्छ । मुटुको स्वास्थ्यको लागि उचित मात्रामा फ्याट युक्त खानेकुराको सेवन गर्नुपर्छ । फ्याट विभिन्न खाद्य तथा पेय पदार्थबाट पाउन सकिन्छ । जस्तै, मासु, दूध, पनिर जस्ता पदार्थमा पनि फ्याटको मात्रा पर्याप्त हुने गर्छ । यही फ्याटकै कारण मुटुको रक्तनली साँघुरो हुँदै जान्छ । त्यसैले चिल्लो र गुलियो खानेकुरालाई निश्चित मात्राभन्दा धेरै खानु मुटुको स्वास्थ्यको लागि उचित हुँदैन ।
अब फेरि आउँछ सन्तुलित मात्रा भनेको कति हो ? सामान्यतया फ्याटको मात्रा यति नै चाहिन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । तर हामीले खाने खानामा एक चौथाइभन्दा कम फ्याट युक्त खाना खानुपर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसर्थ, फ्याट कम गर्नको लागि भने तेल मात्रै नियन्त्रण गरेर हुँदैन । यसमा मासु, दही दूध जस्ता फ्याटको उपभोगमा समेत स्वनियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यको धेरै ख्याल गर्ने कतिपयले तेलयुक्त खानेकुराहरु नियन्त्रण गर्ने भनेर अभियान चलाउने गरेको पनि पाइन्छ । तर यसरी तेल खाँदै नखाने र अरू फ्याट युक्त खानेकुरा धेरै खाने हो भने यसले पनि हामीलाई फाइदा गर्दैन । तेल खानुपर्छ । तर आफ्नो खानामा सन्तुलन भने मिलाउनुपर्छ भन्ने हो ।
अब फेरि अर्काे कुरा आउन सक्छ, तेलको सट्टामा घिउको प्रयोग गर्दा के हुन्छ ? यस्तो दुई विकल्प छन् भने घिउभन्दा मुटुको स्वास्थ्यको लागि तेल नै उचित खानेकुरा हो । किनकि एनिमल फ्याटले मुटु लगायतका अंगलाई त्यति राम्रो गर्दैन । त्यसको सट्टा तोरी, सस्र्यू जस्ता बाली र ओखर जस्ता खानेकुराबाट निकालिएका तेलहरु स्वास्थ्यको हिसाबले पनि बढी सुरक्षित छन् । अहिले त बिस्तारै तोरीको तेल पनि राम्रो भन्ने कुरा आउन थालेको छ ।
अर्काे कुरा ट्रान्स फ्याट पनि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन । यसले पनि मुटुलाई असर गर्छ । ट्रान्स फ्याटले पनि मुटुको रक्तनलीहरुलाई बिस्तारै साघुँरो बनाउँदै लैजान्छ । तेल अन स्याचुरेटेड फ्याटले हो हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्ने गर्छ । यो बदाम, तोरी, जैतुन आदिको तेल अन स्याचुरेटेड हो । जुन मुटुको लागि फाइदाजनक छ ।
कार्तिक ११, २०७८0comment
by नागरिक टुडे अशोज १०, २०७८
केही स्थानमा चियामा बटर वा घ्यू हालेर पिउने प्रचलन रहिआएको छ । यसरी चिया पिउँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ । बटर वा घ्यू मिसाएको चियाको स्वाद मिठो नभएपनि यसले स्वास्थमा हुने विभिन्न समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ । यसैगरी, कफीमा पनि बटर मिसाएर पिउन सकिन्छ ।
– कफीमा बटर मिसाएर पिउँदा जमेको बोसो पगाल्ने काम गर्छ । यसले शरीरमा हुने खराब कोलेस्ट्रोललाई कम गर्छ र आवश्यक क्यालोरी पनि परिपूर्ति गर्छ ।
–कफीमा बटर मिसाएर पिउँदा हृदयघातको खतरा कम हुन्छ ।
– कफीमा बटर मिसाएर पिउँदा शरीरमा मोटोपन कम गराउँछ । यसले पूरा दिन बोसो कम गर्न मद्दत गर्छ ।
– कफीमा बटर हालेर पिउँदा शक्ति प्राप्त हुन्छ । साथै, यसको सेवनले चिसोबाट लाग्ने बिरामीहरु पनि कम गर्छ ।
– कफीको सेवनले दिमागलाई ताजा बनाउँछ । बटरले दिमागका अंगहरूलाई सक्रिय गराउँछ ।
अशोज १०, २०७८0comment
सरकारले ४० वर्ष उमेर समूह माथिका सबै नागरिक ६५ लाख ३७ हजार ३ सय २९ जनाको पिसाब जाँच गर्ने भएको छ । देशका प्रत्येक वडा वडामा पुगेर पिसाब जाँच गर्ने तयारी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सहसचिव डा. कृष्ण पौड्यालले जानकारी दिए । बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मिर्गौला रोगबाट जोगाउन पूर्व सुरक्षाका लागि यो अभियान सुरु गर्न लागिएको बताए । ४० बर्ष माथिका देशभरका नागरिकको पिसाब जाँच गर्नका लागि प्रतिव्यक्ति ५० रूपैँयाको दरले ३२ करोड ६८ लाख ६६ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए ।
प्राय नेपालीको भान्सामा पाकिरहेको तरकारी हो, चना । चनाको तरकारी, रस, भुटेर, अन्य तरकारीमा पकाएर खान सकिन्छ । चना कमजोरी हटाउन, ताकत र ऊर्जाकालागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । किशोरावस्था र युवावस्थामा रहेकाले नियमित रुपमा भिजाएको चना खादा यसले प्रजनन क्षमता विकास गर्नुका साथै शरीरमा ताकत आउँछ ।
क) चना मात्र
– राती सुत्नुअघि एक मुट्ठी चनालाई धोएर एक गिलास सफा पानीमा भिजाउने ।
– बिहान फ्रेश भएर व्यायाम पश्चात् त्यो चनालाई राम्रोसँग चपाएर खाने ।
– चना भिजाएको पानीमा १ चम्चा मह घोलेर पिउने ।
फाइदा : कमजोरी हट्छ, वीर्यको संख्या वृद्धि हुन्छ र वीर्य गाढा हुन्छ ।
ख) चना र बदाम
– एक मुट्ठी चनासँगै पाँचवटा बदाम भिजाउने ।
– त्यहि भिजेको चना र बदाम बिहान मज्जाले चपाएर खाने ।
– संम्भव भए भिजको चना र बदामसंग एक गिलास मनतातो दुध पिउने ।
फाइदा : ताकत र ऊर्जा प्रदान गर्दछ, मांसपेशी बलियो हुन्छ ।
ग) चना र सख्खर
– रातभरी भिजाएको एक मुट्ठी चनालाई बिहान सख्खरसँग मज्जाले चपाएर खाने ।
फाइदा : रक्तअल्पत्ता हुँदैन, रोगसंग लड्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, रुघा–खोकीबाट बचाउँछ ।
घ) घ्युमा भुटेको चना
– राती भिजाएको चनालाई बिहान शुद्ध घ्यूमा भुटेर खाने ।
– भुटेको चनालाई एक गिलास मनतातो दुध पिउने ।
फाइदा : हरेक प्रकारको कमजोरीलाई हटाउँछ, तागत बढाउँछ । तौल बढ्दछ । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा
भदौ १५, २०७८0comment